No fly Zone after 12:00 pm maanta Gaalkacyo Garoomadeedii oo wada Xiran - Wargeyska Faafiye
No fly Zone after 12:00 pm maanta Gaalkacyo Garoomadeedii oo wada Xiran
Masuuliyiinta Dowladda Galmudug ayaa shaaciyay in 12 duhurnimo wixii ka danbeeya aysan diyaarad ka soo degi doonin garoonka W/gaalkacyo.
Iyada oo xiisada u dhaxeysa Maamul Goboleedyada galmudug iyo Puntland ayaa saraakiisha Maamulka galmudug waxaa ay sheegeen in manta wixii ka danbeeya 12 ka duhrnimo uusan shaqeyn doonin Garoonka Gaalkacyo ee dhanka waqooyi ku yaala.
Kulan ay isugu yimaadeen madaxda Maamul goboleedka Galmudug,ayaa waxa ay isku raaceen in aanay dhici karin in magaalada Gaalkacayo labadeeda garoon midna uu shaqeeyo midna Xanibnaado
Shalay ayaa Magaalada Gaalkacyo Garoonkeeda waqooyi Waxaa ka baaqsaday diyaaradaha rakaabka ah iyo kuwa qaramada midoobay ee garoonkaa isticmaali jiray
Maamul goboleedka Puntland,ayaa shalay ciidan aad u tiro badan geeyay garoonka diyaaradaha ee waqooyiga Gaalkacayo kaasoo ay sheegeen in ay ku xoojinayaan ciidankii hore u joogay garoonka diyaaradaha ee dhanka Puntland ee Gaalkacayo.
Sidoo kale Maamulka Galmudug ayaa isna waxaa uu ciidamo Fara badan geeyay meel aan sidaa uga fogayn halka ay fadhiisinka ka dhigteen ciidamda puntlnd, waxaan laga cabsi qabaa in uu isku dhac bilowdo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAskareynta caruurta: Waa in la joojiyaa.A/Suna oo guul ka sheegatay dagaal Ceelbuur ka dhacayThe Diary of a would-be suicide bomberTo salvage his presidency, Obama faces pressure to reboot – but will he?‘He left me dying,’ victim testifies at attempted murder trial